१६ बर्षिय छोरीको हत्या गरि सुटुक्क शव जलाउने यी कस्ता निर्दयी आमा-बाबु ? - pnpkhabar.com
You are at:Home»समाचार»१६ बर्षिय छोरीको हत्या गरि सुटुक्क शव जलाउने यी कस्ता निर्दयी आमा-बाबु ?
१६ बर्षिय छोरीको हत्या गरि सुटुक्क शव जलाउने यी कस्ता निर्दयी आमा-बाबु ?
By रिता घिसिंग on १७ चैत्र २०७४, शनिबार ०९:४४ समाचार
चैत १७, वीरगन्ज : पर्सा प्रहरीले १६ बर्षिय छोरीको हत्या गरेको आरोपमा आमा–बाबुलाई पक्राउ गरेको छ। वीरगन्ज महानगरपालिका १५ भिस्वामा आफ्नै छोरीको हत्या गरेको आरोपमा प्रहरीले स्थानीय ४१ वर्षीय सत्यनारायण वर्णवाल र उनकी कान्छी पत्नी ३० वर्षीया गीता कुमारीलाई पक्राउ गरेको हो।
मृतक नेताका बुबा सत्यनारायण र सौतेनी आमा गीता कुमारीलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साको हिरासतमा राखेर थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरी उपरीक्षक रेग्मीले जानकारी दिए।